Trump oon ku dhaganayn xalka labada dawladood | Baydhabo Online
Trump oon ku dhaganayn xalka labada dawladood
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donala Trump ayaa joojiyay siyaasaddii Maraykanka ee ku adkaysanaysay xal labo dawladood ah oo dhexmara Falastiiniyiinta iyo Israa’iil.
Trump oo uu weheliyo ra’iisalwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa shir jaraai’d ka ku balan qaaday in uu horseedi doono nabad “ballaaran”, laakiin wuxuu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinacba ay waajib tahay in ay isu tanaasulaan.
Israa’iiliyiinta iyo iyo Falastiiniyiinta ayaan wadahadallo nabadeed oo wax ku ool ah yeelanin tan iyo 2014kii.
Trump ayaa intii uu shirka jaraa’id ka hadlayay ka codsatay Netanyahu in uu “dib u dhigo xoogaa” deegaamaynta.
Israa’iil ayaa meelmarisay kumanaan guri oo cusub oo laga dhisayo Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus tan iyo markii uu Trump la wareegay talada bishii hore.
Xukuumadda Israa’iil waxay rajaynaysaa in ay calaaqaad wanaagsan la yeelato Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka ka dib siddeed sano oo xiriir aan aad u wanaagsanayn uu kala dhaxeeyay maamulkii Obama.
Shirka Arbacadii ay yeesheen labada masuul mid koodna si cad uma uusan sheeg in uu taageersan yahay Falastiin Mustaqbalka madaxbanaanaata, taas oo wakhti dheer gundhig u ahayd siyaasadda Maraykanka.
Waa maxay xalka labada dawladood?
“Xalka labada dawladood” ayaa ah hadaf ay dajiyeen masuuliyiinta Falastiiniyiinta, Israa’iiliyiint iyo beesha caalamka.
Taas oo aakhirka ogolaanaysa abuuridda xukuumad madaxbanaan oo Falastiin leedahay, taas oo ku qotonta xadaynta xabdad joojintii 1967dii ee Daanta Galbeed, Marinka Qasa iyo Bariga Qudus, iyaga oo si nabad ah kula noolaaanaya Israa’iil.
Qaramada Midoobay, Jaamacadda Carabta, Midawga Yurub, Ruushka iyo Maraykanka wixii hadda ka horeeyay, waxay ku celcelin jireen sida ay uga go’an tahay fikirkaas.